downloads 47 571
Update Full on 06 / 06 / 2012: Halkan waxaa ugu dambeeya oo ka dhashay Air France, Airbus A380! Daweyn dhab ah oo duulista iyo faraxsanaanta ah ayaa damaanad qaadeysa, nooca FS2004 ee u dhashay. waxaa ka mid ah dhawaqyada caadada u ah, isbeheysiga gaarka loo leeyahay (VC) ee gaarka u ah moodelkan (waxbana kuma lahan FSX nooca). Note that this add-on has no 2D panel (flat cockpit version), so you must fly in virtual cockpit view only, Waa in ka badan macquul ah.
- On October 30, 2009, Air France-KLM ayaa helay ugu horeysay Airbus A380
- On November 20, 2009, shirkadda ayaa diyaarad gabadhii of A380 u dhexeeya Paris iyo New York la 538 rakaabka saaran.
Air France ka bixinta ah ee ay ugu horeeyay ee Airbus A380, diyaarad ee dunida ugu weyn, taas oo qaadi karaan rakaab 538 badan km 13,000. Saddex ka mid ah laba iyo toban diyaaradood on si loo dhiibi doonaa Air France oo u dhexeeya hadda iyo 2010 guga, in la si dhow ula raacay by a afaraad. Laga bilaabo on 23 November 2009, France Air ee A380 la qalo doonaa on duulimaad maalin kasta u dhaxeeya Paris - Charles de Gaulle iyo New York - JFK, raaceen by Paris-Johannesburg xilliga jiilaalka 2009-2010.
Sidaa darteed Air France waa side Yurub ugu horeeyay ee ay ku shaqeeyaan Superjumbo this, iyo airline ugu horeysay caalamka oo dhan si ay u bixiyaan duulimaad transatlantic u dhexeeya Europe iyo USA oo la diyaaradaha this.
A380 ayaa si gaar ah iyo sidoo kale-ku habboon tahay istaraatijiyad ee Air France, oo ay size waa ciyaar fiican ee xarun awood diyaaradaha ee Paris - Charles de Gaulle.
Its matoorada GP 7200 afar gobolka-of-the-art, ay qaab aerodynamic iyo sooctey iskudhafka ah farsamooyinka ugu dambeeyay ka dhigi A380 ah diyaaradaha ugu deegaanka dhibaato u keeneyn ee ay category.
«In 1996, Air France oo ku salaysan ay go'aan si ay u bartaan A380 ku saabsan shuruudaha Ujeeddada oo cadeeyay in waxqabadka diyaaradaha this waxaa haboon in shirkadda shuruudaha», sheegay Jean-Cyril Spinetta, Guddoomiyaha Guddiga Agaasimayaasha ee Air France-KLM .
A380 ayaa ku faantaa awooda u dhiganta in of a Boeing 777-200 iyo Airbus A340-300 isku daro, halka bixiya hoos 20% ee kharashka qalliinka.
«A380 kasta oo awood u siin doona Air France si 12 in 15 sano ah million euros, taasoo, ee cimilada dhaqaalaha niyad maanta, waxay bixisaa Company la tahay in ay u adkeysan xiisadda badbaadiyo. Sidaa darteed Air France awood u yeelan doonaan in ay bixiyaan macaamiishu ay raaxada xitaa weyn, iyadoo kharashka ay ka taliso. Intaas waxaa sii dheer, waxqabadka A380 waa in line la deegaanka go'naa Company ayaa », ku daray Pierre-Henri Gourgeon, CEO of Air France.
Air France ee A380 bixisaa rakaab saddex darajo: La Ciyaar-First - kuraasta 9 midige ugu weyn - Affaires-Business - kuraasta 80 midige sare - iyo kursiyada Voyageur-Dhaqaalaha 449 faafin labadii tu. In qol kasta la yaabka lahaa way xasilloonayd, Air France ayaa abuuray ah alkumay nasteexo saaxiib, mahad nalalka hagaajin habboon in marxaladaha kala duwan ee horyaalka. Hadday tahay hal dhibic kulanka ama goobta nasashada, qol kasta ayaa lagu rakibay soo rakaab ah wax walba oo u baahan in la sameeyo ay waayo-aragnimo diyaarad ka mid ah sida runta ah lagu farxi karo. midiidinnadiisa duulimaadka 22 waa on board in ay u adeegaan macaamiisha 538.
Goor hore 1996, Air France ka qeyb qaatay kooxaha ka shaqeeya oo ay ku jiraan Airbus iyo daah-sidayaal ugu weyn ee A380 ah, si aad ugu qorshayso diyaarad oo kula kulmi karto macaamiisha laga filayo, wuxuuna u darbay ay imaanshaha tan 2003. Air France ayaa sidoo kale la soo shaqeeyay maamulka garoonka diyaaradaha si ay u qabsadaan goobaha dhulka in this diyaarad cusub, loo tababaray markabka iyo shaqaalaha dhulka iyo maal in qalabka sagxada haboon.